Easy Ụzọ onwe elu Space na ihe iPhone
> Resource> Clean-elu> Mfe Ụzọ Kọwaa Space on iPhone
N'adịghị ka Android ma ọ bụ Symbian ntị, iPhone adịghị ekwe ka ndị ọrụ na-tinye a SD kaadị nwere ọzọ ohere na-echekwa songs, ngwa, ma ọ bụ vidiyo. Ọ bụrụ na gị iPhone-agba ọsọ nke ohere, ịgbakwunye ọhụrụ ihe, ị kwesịrị ị na-amụta otú onwe elu ohere na gị iPhone. O yiri ekpocha ohere na ihe iPhone bụ nnọọ ike. N'ezie, ọ bụ nnọọ mfe. Ka-esi ala ka ọrụ nke gwakwara elu ohere na iPhone.
Part 1. Wepụ Media faịlụ site iPhone
Part 2. Wepụ ngwa site iPhone
Part 1. Wepụ Media Files (Songs, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Video, iTunes U, Pọdkastị, na Photos)
Ọ bụrụ na gị iPhone na-stuffed na songs, TV, ihe nkiri sịnịma, ma ọ bụ agadi iTunes U, pọdkastị, ka weghaara videos na photos, onwe elu ohere na gị iPhone, ihe mbụ ị ga-eme ya na-ewepụ ha.
Ngwọta 1. Iji aka Wepụ Media Files na iPhone onwe elu iPhone ohere
# 1. Ọ bụrụ na gị na iPhone bụ iOS 5 ma ọ bụ iOS 6, na ị na-enwe ike-ewepụ ihe niile ihe ndị a site na ịme ọpịpị Ntọala> ojiji. Na mgbe ahụ na ọhụrụ window, nile ngwa ọdịnala na-egosipụta na ya size n'akụkụ aka nri. Site ndabara, nile ngwa ọdịnala na-ota site size. Pịa ngwa. Hichapụ si ikike hapụrụ aka "Hichapụ" nhọrọ. Ka ihe atụ, iji wepụ music, ị dị nnọọ mkpa pịa Ntọala> ojiji> Egwu. Hichapụ-esi n'aka nri-ekpe-ewepụ ihe niile songs na listi ọkpụkpọ na Music ngwa.
# 2. Ọ bụrụ na gị iPhone na-agba na iOS 7, n'elu kwuru banyere nhọrọ na-agaghịkwa nyere. Na nke a, iji wepụ media faịlụ, na ị na-kwesŽrŽ ime ya otu-site-otu na gị iPhone aka. Ebe a na-ewere na iwepu music dị ka ihe atụ. Ị kwesịrị ị na pịa Music ngwa gị iPhone. Na mgbe ahụ na window, họrọ a song na enweta na ájá biini.
Cheta na: Iji zere adịkwa ọ bụla media faịlụ na ị chọrọ ịnọgide na-, tupu wepụ ha si iPhone, ị ga-ndabere ha ma na-iTunes Library ma ọ bụ na iPhone. Iji mee nke a, ị kwesịrị ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Windows version) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ha na-enwe ike ndabere nile n'elu kwuru banyere media faịlụ gị iTunes Library ma ọ bụ kọmputa.
Ngwọta 2. Wepụ Media Files na iPhone amamihe
N'eziokwu, i mkpa mgbe nile na-ụfọdụ media faịlụ na ihichapụ achọghị ndị na gị iPhone, nri? Ọ dị mma. Na nke a, kama okodu a ogologo oge wepụ na-achọghị ndị aka, ị ga-agbalị a ngwá ọrụ na-eme ya ngwa ngwa. Wondershare TunesGo na Wondershare TunesGo (Mac) ga-egosipụta media faịlụ na windows, ekwe ka ị họrọ a ogbe nke faịlụ na ihichapụ ha n'otu ntabi anya.
Ị nwere ike ibudata nri TunesGo inwe a na-agbalị!
Part 2. Wepụ iPhone égwu onwe elu Space on iPhone
Mgbe ụfọdụ egwuregwu na ihe ngwa ga-ogide ọtụtụ n'ime gị iPhone ohere. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji ha, ị kwesịrị ị na-ewepụ ha si gị iPhone na iTunes na kọmputa gị.
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na ẹkedori iTunes;
Pịa View> Gosi sidebar. N'okpuru Ngwaọrụ na ekpe, pịa gị iPhone. Na na n'akụkụ aka nri nke window, pịa égwu.
Si ebe a, ị kwesịrị ị idozi ngwa site size gosipụta nnukwu ndị na n'ihu. Pịa Wepụ bọtịnụ na nri nke ihichapụ achọghị ngwa.
Cheta na: Echegbula onwe gị banyere ị chọrọ ha ụfọdụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ndị a niile ngwa ọdịnala na-zụrụ si iTunes Store, ha ga-nọ na zụrụ ihe.